Affiliate - YTpals
Mahazo Vaomiera 20% amin'ny varotra sy mahazo fandoa vola taorian'ny nahazoana $ 100 +
Midira na misoratra anarana ho Affiliate
Maimaimpoana ny programa. Mora ny misoratra anarana ary tsy mila fahalalana ara-teknika. Matetika manerana ny Internet ny programa ampifandraisana ary manome ireo tompona tranokala fomba iray hafa hahazoana tombony amin'ny tranonkalany.
Rehefa mandray anjara amin'ny fandaharan'asa ifandraisanay izahay dia homena rohy URL tokana izay azonao atao ao anatin'ny tranonkalanao na mizara amin'ny alàlan'ny mailaka na ao amin'ny pejin'ny media sosialy. Rehefa manindry ny iray amin'ireo rohy tokana misy anao ny mpampiasa iray, dia hoentina mankany amin'ny tranokalanay ary hotantanan'ny rindrambaiko ifandraisanay ny hetsika. Hahazo vaomiera ianao rehefa hanao fividianana izy ireo.
Vaomiera vaomiera: Mandoa-Per-Sale 20% isaky ny varotra amaritanao.
Tena ilaina ny fandoavam-bola: $ 100 USD - Ny fifandanjana ambany indrindra takiana amin'ny karama.
Faharetan'ny fandoavam-bola: Ny fandoavam-bola dia atao indray mandeha isam-bolana, ho an'ny volana teo aloha.
Ho an'ny antsipiriany rehetra azafady Mifandraisa aminay.
Aoka ianao ho tonga mpiara-miasa amin`izao fotoana izao